Umboniso we-Pegida IHague 10 Ngo-Ephreli 2016 yazingqina ngokupheleleyo (iifoto namavidiyo): UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	11 Aprili 2016	• 3 Comments
NgeCawa, Aprili 10 2016 ndaya nomhlobo kwi Hague ukuba uyavumelana inkululeko zobuqu inxaxheba kunokubonisa Pegida ukubona ukuba umfanekiso ukuba imizobo eendaba ingqamana yokwenene. Kungekudala sifumanisa ukuba oku akunjalo. Okanye ngaba bona buqu ukuba loo umboniso misho ngokupheleleyo ngamajelo osasazo ukuba counter-umboniso kuquka kwabanjwa kubonakala ukuba abulawe ngokupheleleyo ndawo.
Usuku lwaqala kakuhle xa sithatha indebe yekofi malunga nesigxina esithoba kwintsimbi emini kwaye ndaqala ukucola ngefowuni ngasemva kwecingo ejongene noSpui Square. Ngokukhawuleza izaziso ezimbini zafika kuthi ukucela ikhadi lethu le-ID. Enyanisweni, kwavela ukuba ngokwenene benza oku nabo bonke abadlula. Inani lamapolisa langoku lalikhulu kakhulu xa kuthelekiswa neqela lababonisi. Ndiqikelela ukuba kukho ii-1 zithunywa kwiibonisi ze-500. Oku kuhambelani nemilayezo kwiindaba eziqhelekileyo, ezibiza ukuba kukho Ababonisi be100 babekho. Oku kubonakala ngathi, kuba kukho malunga ne-1 kwiintatheli zeendaba ze-1, iifoto-zithombe okanye i-cameramen phakathi kwababonisi. Kwakubonakele ububoniso obubuhlungu. Ukuvulela kwakungeke kubonakale. Kwakunjalo nento ebizwa ngokuba yinkqubo yokubonisa.
Kwanangaphambi kokuba umboniso yaqala, zenziwe iinzame kubamba njengentsomi kuba ME okhoyo 'ephuma blue "umsebenzi lomzabalazo UFrank van der Linde babanjwe. Oku kwakubonakala kusengaphambili, ngenxa yokuba zonke iikhamera kunye neefoto zabafoto bazi kakuhle umzuzu kwaye bekulungele ukudubula imifanekiso. Akusiyo nto into yokuba uFrank mhlawumbi uzibiza ngokuba ngumdlali onguchwepheshe, kuba ngokuqinisekileyo wayebukeka njengesenzo esicatshulweyo. Nangona kunjalo, ayingekho iprofestile ukuba eli xesha elinye imithombo yendaba ithatyathwe ingqalelo. Yintoni eyenzekayo? UVan der Linde akazange ahlawuliswe kuyo yonke into engasemva kwevini, kodwa wayesebenzisa ingxoxo ngemizuzu emininzi eyayibambelele ngobunzima phambi kweekhamera. Busted!
Umboniso ngokwawo wawunezo zonke iinkalo zesiboniso sokuseta. I-helicopter yamapolisa igqibe umboniso. Ukubanjwa kwakukho kunye nekhamera, i-blonde eye yawela phantsi kwiindidi ze-wierdo kunye nomlawuli. Ukongezelela, kwakukho iqela le NIS, Telegraph, losasazo entshona kwaye awukwazi igama it. Yintoni elifunekayo eli lizwe lonke loonxibelelwano kwindlela ebonisa ukuba yincinci? Impendulo sele isacinga. Kumele kubonakale ukuba impumelelo eninzi iphunyezwe ngokukhuthaza abantu. Akukho nto incinci. Ukuhamba kwakungekho nto ngaphezu kwezinto ezimbalwa eziqeshwe. Hayi, andizange ndibone ukuhlawula kwabo ukufakazela ukuba baqeshwe, kodwa kwakungekho nto ngaphandle kwenkampani enemibala kakhulu enikwe amabhanti afanelekileyo kunye neempawu zeqela lePegida ngexesha elifanelekileyo kwaye zibeke phambi kwazo. ukuqala ukufaka ikhamera. Yonke into yajikeleza ngeekhamera kunye nezibhamu. Kwaye ke, ndatshwenyeka, ndlebe ndlebe ndlebe ndlebe ndlebe nabo bonke aba bengezelele.
Ngomzuzwana othile ndema ukuphulaphula indlebe nodliwano nodliwano kunye nenkosikazi eneenwele ezibomvu ezidaywe. On ebuza kamva ukufumanisa ukuba baphile ekufutshane yaye blog yabo kwaye wayesele wabamba into incoko phakathi amagosa asebupoliseni. Yathi yakuva ukuba inani 25 ezo bezisezilungile nxamnye demonstrators kwi Burger King lokuhlasela Pegida kuka-extras. Bona ividiyo elapha ngezantsi. Ukuba, ngokukhawuleza, uva ingxolo yengemuva, kuyavakala ngathi iintetho ezithandekayo zenziwa. Baba nto ngaphezu kwabantu 4 kuquka Pegida Netherlands iiforimani Edwin Wagensveld kunye nabanye abantu abafunda inqaku.
Yingakho ndagqiba kwelokuba ndibonise umboniso kwaye ndithathe isikhundla sePoler King. Kwaye, babekho apho. I-counter-demonstration extras. Ndibabiza ngokuba ngumbonisi owongeziweyo ngenxa yokuba yayisenzo sonke. Ngethuba lobudlova obudlalwayo, amalungu amaninzi kweli qela afaka i-grin ebanzi ebusweni bawo, apho ungabona ukuba bedlala ibakala. Ngokubhekiselele ekukhathaleleni kwethu, kubonakala kunzima ukuba yonke ibhola yekontraki yayisanda kufakwa apho ukubeka ukuboshwa kwimeko. Kungenxa yoko kutheni ubambe iqela kwi-Burger King de ukubonakaliswa kwePegida ize ibambelele ngenxa yamehlo eekhamera? Ngaba unokukwenza oko ngaphambi kwelo xesha? Ayenzanga nto ngaphandle kokumemeza encinci. Okanye ngaba kukho kuphela ukuphazanyiswa kolawulo loluntu? Akukho nto. Kwakungekho mlilo owaphonswa kwaye akukho nto eyenzekayo, kodwa ke babanjwa. Ngamafutshane, bonke abo babanjwe babengenanto nje yokubonisa. Busted kwakhona!
Kwakumnandi ukubona indlela ukubonakaliswa kwayo ngokugqithiseleyo yi-ME kuqhutywe kulo mzi kwaye akukho nto enye ngaphandle kwesiqubulo esifanayo esicatshulwa kunokuba "AZC kunye nayo!"Kwakubonakala ngathi le hambo lokuhamba ngakuloo dolophu kwakungekho nje ukubonakala; kuhloswe ukuhlela ukuphazamiseka encinci kwi-Burger King kubadlali bekhamera nabafoto. Ukubanjwa kwe-54 echazwe kwi-counter-move movement mhlawumbi i-tad exaggerated. Unako ukubala ukuba zininzi ezingaphezulu ezikhoyo kwi-Burger King. Ngokweqile, kwakungekho nabasebenzi kwi-Burger King, ngoko kwakubonakala ngathi isithuba sasiqeshwe kweso sihlandlo.
Isizathu sokutyelela kumboniso e-Hague kwakukuze ubone ngamazwi akho ukuba into enjalo isetyenziswe njani nendlela ihamba ngayo. Ngaphakathi 2013 ndazibona yonke imbonakalo ibonakala ihlawulwe ngokupheleleyo. Okwangoku kuyacaca ukuba esi sigqibo sichanekile. Ukuba ucinga ukuza kubonisa kwakhona, yazi ukuba yonke into ilawulwa nguRhulumente. Oh yeah, kunye nekhamera yayo imoto yamapolisa (bona i van kumhlophe iseti) kuquka inqwaba iikhamera ehlabathini ibhasi kwaye ezimbini iikhamera ejikelezayo enomtsalane bhanyabhanya yonke into yaye mhlawumbi sele ubhalisile ubuso bakho nje kancinci kwindawo ejikelezile. Yonke into ilawulwa yipolisa likarhulumente.
Iphakheji elungileyo efunyenwe ngaphambi kokubhikisha uPegida Amsterdam
Ukubanjwa kubonisa ukuba uPeggida kunye no-Antifa basebenza kwimiboniso nabaphulaphuli abaqashiweyo
Amapolisa aseJamani avimbele ukwesatshiswa kweJabr al-Bakr
tags: 10 April, 2016, 54, kubanjwa, kubanjwa, bonisa, Den Haag, eziziimbalasane, Nep, Pegida, Polisi, umboniso
11 Aprili 2016 kwi-14: 47
Yiyiphi inkunkuma yonke. Konke kwakuthetha ukuphonsa ioli phezu komlilo. Kuhle ukuba uyibonile ngamehlo akho! Ukubhalwa kwesekisi yendaba yeendaba kubangelwa ikakhulukazi ngamacandelo aqingqiweyo / amanga.
Ngaphandle kwesihloko kodwa ezifanelekileyo (ndicinga ..):
Ukwakhiwa kweetempileni zikaBhahali ezixhaswe yi-Unesco, phakathi kwabanye:
12 Aprili 2016 kwi-07: 22
I-(ebizwa ngokuba yi-Pegida demo) kunye ne-anti-demonstration e-Amsterdam yayiyi-1 enkulu yokudlala kunye nomfutho wombuso ngaphezulu kunokuba (kubambe) abemi bokufuzisela.
Kananjalo staatsafgezant ku studio ye AT 5 in iliso nabohanahaniso impahla idemokhrasi abantu kwafuneka ukuba idle zebinzana 'inkululeko umboniso "wayefunde ngentloko.
Iingoma zokuthetha ze-antidemo zaza zahlabelela kunye neengoma kunye namazwi, u-Andre Rieu wayenokuziqhayisa
Bona apha uYise Civic (leyo eyenza advertising Starbucks on TV) bazi ukuba isiganeko isigcawu walimisa nto uhlala cwaka kakhulu kwaye akazange nje ukufumana ukuba ixabiso Machiavelli 2013
Kwiminyaka eminci ubudala, ukwahlula abalawuli kunye ngeCawa lebhola yebhola kwaye, ngokuqinisekileyo, imikhosi yokomisa
MQ wabhala wathi:
4 Meyi 2016 kwi-23: 36
USteve Brown unombono ofanayo malunga neentetho zePegida
« Umdlali webhola yebhola yebhola yebhola uBebastien Bellin walimaza ekuhlaseleni iBrussels ufumana ibali lakhe kodwa alunganga
Urhulumente ulinganise ngemali abantu abadala asebekhulile »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.804.978